Xildhibaan iska fogeeyay inuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab | KEYDMEDIA ENGLISH
Xildhibaan iska fogeeyay inuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab
Xildhibaankaan ku guuleystay HOP039 ayaa beeniyay in uu xiriir la leeyahay Al-Shabaab isaga oo difaac ka dhigtay in dalka dibaddiisa uu waxbarasho u aaday kahor inta aanay aasaasmin, faraca Al-qaacida ee bariga Afrika.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dr. Cali Xaaji Aadan Abuubakar, oo ka mid ahaa xunbaha Baarlamaanka 11-aad ee shalay la dhaariyay, ayaa iska fogeeyay eedo maalmihii la soo dhaafay lala xariirinayay oo ku aaddan inuu la dhacsan yahay hannaanka iyo xukunka Kooxda Al-Shabaab.
Labo todobaad ka hor waxaa si weyn baraha bulshada loogu baahiyay, muuqaal laga duubay isaga oo ku sugan degaanka Ceel-cali ee gobolka Hiiraan, halkaasoo Kooxda Al-Shabaab ka arrimiyaan, waxaana lagu qabsaday, erayo uu adeegsaday xilligaas oo ah “Wilaayada Islaamiga Ah”.
Kooxda Xiriirka la leh, Al-qaacida ee Al-Shabaab, waxa ay degaannada ay ka taliyaan, ugu yeeraan Wilyaad Islaami ah, oo ay ula jeedaan gobollo ama degaanno maamul Islaami ah ilaalliyo, waana arrinta keentay hadal-heynta iyo in baraha bulshada lagu duro, Cali Xaaji, oo ku fadhiya HOP#039.
Hayeeshee, Xildhibaanka oo wareysi arinkaas la xariira siiyay laanta afka Soomaaliya ee VOA, ayaa sheegay in muuqaalkaas la duubay 2014, markaasoo uu howlo wax barasho u tagay degaanka Ceel-cali, oo ay ilaa hadda ka taliyaan Al-Shabaab, wuxuuna ku sheegay inuu ku qasbanaa adeegsiga ereyadaas.
Wuxuu xusay inuu goobta ka jeediyay khubdad dheer oo ku saabsan howlo waxbarasho iyo hormarinta Iskuulka degaanka, isla-markaana Guddigii maamulayay Iskuulka ay u xil saareen inuu hadlo, khudbadiisina laga soo qaatay qeybta ay ku jiraan erayadaan, iyadoo laga leeyahay dano gaar ah, waa sida uu sheegay.
Doorashada kursiga HOP039, oo 04/04/2022, ka dhacday magaalada Baladweyne, ayuu ku guulesytay, Dr. Cali Xaaji Aadan Abuubakar, wuxuu shalay ku jiray Xildhibaannada la dhaariyay, isagoo berri ka mid noqon doona Xubnaha Golaha Shacabka ee yeelan doona fadhigii 1-aad ee Golaha.
Keydmedia Online, ayaa xasuusata in uu magaalada Muqdisho isku qarxiyay, Saalax Nuux Ismaaciil oo ku magacdheeraa (Saalax Bad-baado) July 26, 2016, kaasoo hore uga tirsanaa xubnihii Baarlamanka ee dowladihii ku meel gaarka ahaa, wuxuuna qaraxaas oo ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ku dilay 13 qof.